OEM ODM Eye Cream Waayo Anti duuduubka Anti Gabowga Cosmetics OEM & ODM
OEM ODM Eye Cream Waayo Anti duuduubka Anti Gabowga
Phospholipids, Trehalose, Betaine, Citrus Paradisi (Grapefruit) Extract Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Camellia Sinensis Extract, Centella Asiatica Extract, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Warbixiinta Caleenta, Glycyrrhiza Glabra (Rootorta Root Root) Soosaaray, Chamomilla Recutita (Matricaria) Soosaarida Ubax
Gabowga, lidka-duuduubka, qoyaanka, iyo nafaqada
Waxyaabaha ay ka kooban tahay xirmo dhowr lakab ah oo ay ku jiraan fosfoofiyadleyda, trehalose, iyo betaine.
Maaddaama fosfooliidku lamid yahay fosfooliid bilayer-ka ku jira xuubka unugga, ka-mid noqoshada waxaa lagu dhex dari karaa xuubka unugga si markaa doorbid ahaan loogu geeyo walaxda firfircoon xuubka unugga iyo xuubka unugga. Markaad gasho dusha sare ee unugyada, molecules-ka loo yaqaan 'phospholipid molecules' waxay si adag ugu xirmaan xuubka unugga, iyagoo kordhinaya xiisadda dusha sare iyo dabacsanaanta xuubka unugga. Dhanka kale, qaabdhismeedka lipid fosfoofiyadku wuxuu leeyahay xiriir sare oo leh matoorrada ka baxsan jirka waana sahlan tahay in la gaaro lakabka maqaarka.
Phospholipids: Iyadoo leh dufanka 'polar', waa qayb muhiim ah oo ka mid ah xuubabka unugyada; isku xirnaanta maqaarka oo qumman; helitaanka bioavailability maqaarka oo aad u sarreeya; astaamaha gaadiidka la bartilmaameedsaday; yaraynta luminta biyaha transepidermal iyo kororka qoyaanka maqaarka.
Substance Maaddada firfircoon ee duudduuban - trehalose
Trehalose waxay soo saartaa sonkorta alpine, inta hartay ee nafaqada liidata, molecule-ka trehalose wuxuu si xoog leh ula falgalaa kooxda madaxa ee cirifka ee fosfooliid bilayer, kaas oo xasilin kara xuubka molecular, taas oo ka dhigeysa unuga maqnaanshaha biyaha inuu wali ilaaliyo biyo si loo ilaaliyo nolosha iyo tamarta noolaha.
Substance Maaddada firfircoon ee la soo koobay - betaine (Cunsurka uumiga dabiiciga)
Daryeelka aasaasiga ah ee maqaarka kadib, mari qaddar ku habboon oo si tartiib ah indhahaaga ugu mari farahaaga.